UNgqongqoshe wethule isikhungo sezasolwandle eMfolozi TVET College – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe wezemfundo ephakeme kuzwelonke uMnuz. Blade Nzimande ehambisana noNgqongqoshe wezemfundo Kwa Zulu-Natali uMnuz. Kwazi Mshengu kanye nezinye izikhulu ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni i Maritime Academy eMfolozi TVET College eSikhawini Campus.
UNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, ezoBuchwepheshe nokuQeqesha kuzwelonke u Blade Nzimande wethule isikhungo i Maritime Academy eMfolozi TVET College eSikhawini Campus.
Lesi sikhungo kulindeleke ukuthi selekelele abantu abasha bakule ndawo abanothando lomkhakha wezasolwandle. Ezinye zezinto ezilindelwe ngokwethulwa kwalesi sikhungo ukuthuthukisa abantu abasha ngolwazi lwezomnotho otholakala olwandle.
Ekhuluma emcimbini wokwethulwa kwalesi sikhungo, u Nzimande uthe uzinikele ekuthuthukiseni izinga lemfundo etholakala ezikhungweni zemfundo ezaziwa ngama TVET Colleges.
“Ngifisa ukusebenzisa leli thuba ukuqinisekisa emikhakheni yama TVET Colleges, kubafundi, abasebenzi kanye nomphakathi ukuthi ubuholi bami buzoqinisekisa ukuthi izinga lemfundo elitholakala kulezi zikhungo liyathuthukiswa, sizimisele ukwethula izinhlelo ezifana nalezi ezingandile kulezi zikhungo ukuze sizokwazi ukweseka ukuthuthukiswa komnotho wezwe lethu,” kusho uNzimande.
UNgqongqoshe wezemfundo Kwa Zulu-Natali u Kwazi Mshengu uthe ukuvulwa kwalesi sikhungo kusho lukhulu emnyangweni wakhe njengoba besemkhankasweni wokwethula izifundo ezizosiza ukufukula umnotho wezwe ezikoleni.
“Siqopha umlando namhlanje ngokwethula lesi sikhungo, kuyasithokozisa vele ukuba nohlelo olufana nalolu ngesikhathi lapho sifuna ukwethula izifundo ezizosiza ukukhuphula umnotho wesizwe. Sikushayela ihlombe ukwakhiwa kwalesi sakhiwo esizosiza abafundi ngolwazi olunzulu njengoba sigabe ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu,” kusho uMshengu.
Ukwethulwa kwalesi sikhungo kuphendula ikhwelo le Meya yase Mhlathuze uCllr. Mduduzi Mhlongo okuvele ukuthi ubenephupho lokubona kuthuthukiswa ezohwebo embonini yezasolwandle ngohlelo lwe Operation Phakisa.
Kulesi sikhungo kuzotholakala izifundo zesikhathi esifishane (short courses) ezingama 20, izifundo zezitifiketi (certificate programmes) ezingu 14 kanye nezifundo ze diploma ezingu 18. Zonke lezi zifundo zizogunyazwa abe South African Maritime Safety Authority.
Ukuvuselelwa kwesakhiwo, ukulungiswaa kwamagumbi okufundela kanye nokuhlinzekwa kwezinsiza kufunda kuvele kuxhaso lwe National Skills Fund, Transport Education Training Authority, Norway kanye ne Sweden.
Iqoqo lokuqala labafundi abangama 67 baqala ukuqeqeshwa ngo April, kulindeleke ukuthi abangama 240 baqale ukufunda nge semester elandelayo.